” အသာတကြည်အဖမ်းခံနေတဲ့သူကို လူမြင်ကွင်းမှာရိုက်နှက်တာ ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီရဲ့လား…. “ – NapannSan
” အသာတကြည်အဖမ်းခံနေတဲ့သူကို လူမြင်ကွင်းမှာရိုက်နှက်တာ ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီရဲ့လား…. “
By Ms.Yellow SanPosted on October 8, 2019
” အသာတကြည်အဖမ်းခံနေတဲ့သူကို လူမြင်ကွင်းမှာရိုက်နှက်တာ ကျင့်ဝတ်နဲ့ညီရဲ့လား…. ”
ကြမ္မာငင်လာပြီ ဆိုရင် ဘယ်သူ မှ မကယ်နိုင်တော့ဘူး။ သတင်းတွေဖတ်ရတာ စိတ်လည်း မကောင်းဘူး။ လူငယ် အဆိုတော် တစ်ယောက် ဆေးပြား အနည်းငယ် နဲ့ မိတဲ့ ကိစ္စ.။
မူးယစ်ဆေး တရားလည်း မဟောချင်ပါဘူး ။ လောကမှာလူဆိုတာ ကိုယ့်တရားကိုယ်စီရင်ကြတာမျိုးမဟုတ်လား။ အောင်မြင်စအဆိုတော်… အဲ့ဒါက သိပ်အံ့သြစရာမရှိ၊ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတယ် မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အတွက် သုံးစွဲတယ် ဆိုတာ ဟုတ် မှ ဟုတ်ပါ့မလား မျက်နှာလိုက် တွေးမိတယ်။ ဘေးလူကိုယ်ပေါ်က တွေ့တာလို့လည်း ဖတ်ရတယ်။ ကိုယ်လုပ်လို့ ကိုယ်ခံရတာ ပြသနာမရှိပေမယ့် မလုပ်ဘဲ ခံရရင်တော့ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။
သတင်းပေးလို့ပဲဖမ်းဖမ်း၊ ဘယ်လိုပဲ ဖမ်းဖမ်းပေါ့လေ။ ဖမ်းတဲ့လူကလည်း သူ့အလုပ်သူလုပ်တယ်ပေါ့။ ဘဝင်မကျတာ တစ်ခုက ဖမ်းတာကို လက်ခံပေမယ့် လူမြင်ကွင်းမှာ မျက်နှာကို ရိုက်နှက်တာ၊ ထိုးတာမျိုးကို ဗီဒီယိုဖိုင်မှာ မြင်ရတယ်။ ခုခံနေတဲ့ အခြေအနေဆိုရင်တော့ သေနတ်နဲ့ပဲ ပစ်ဖမ်းဖမ်းပါ၊ ခုခံနေတဲ့အနေအထားမျိုးလည်း မဟုတ်ဘဲ လူမြင်ကွင်းမှာတောင် ဘေတာကျ အတော် ရင်ထဲမကောင်းဘူး။ အထိုးခံရသူ ဘယ်သူမှန်းလည်း မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆေးသုံးစွဲရင် သုံးစွဲမှုနဲ့ အပြစ်ပေးပါ။ လူမြင်ကွင်းမှာ ရိုက်ရနှက်ရအောင် လူတိုင်းမှာ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အတော်မြင်မကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ပါပဲ။
မူးယစ်ဆေးမှုကို အဆိုတော်မို့ ကာကွယ်ပြောဆိုနေတာ မဟုတ်ဘူး။ တကယ်သုံးစွဲတယ်၊ တကယ်လက်ဝယ်မိတယ်ဆိုရင်တော့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ စိတ်မကောင်းရုံက လွဲရင် သူ့အပြစ်သူခံပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ထုတ်လုပ်သူဖြန့်ချီသူတွေ၊ လက်ကြီးသမားတွေ၊ ကွန်တိန်နာလိုက် သမနေတဲ့ လူတွေကျ လွတ်နေပြီး ဆေးခြောက်တစ်ကျပ်သား၊ ဆေးပြားဆယ်ပြားလောက်နဲ့ ဘဝပျက်နေကြရတာ ဘယ်လိုမှ မတန်ဘူး။ (Candy ဘာညာ ကြားပေမယ့် အဖြေထွက်တဲ့အထိ စောင့်ကြည့်ရုံသာ ရှိမယ်)
ထုတ်လုပ်သူ၊ ဖြန့်ဖြူးသူ၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတွေကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပေးကြပါ။ ဈေးပေါပေါနဲ့ လက်လှမ်းမှီမှီရနေသရွေ့ သုံးစွဲသူအဆင့်ကို ဖမ်းတဲ့လူသာ မောသေမယ်၊ လျော့ကျ ပပျောက်စရာ အကြောင်းမှ မရှိဘူးဆိုတာ လက်ခံပေးကြပါ။ ကိုင်းဖျားတွေ ချိုင်ပြီး ရေသောက်မြစ် မဖြတ်သရွေ့ ဒီအဆိပ်ပင်ကြီး ဘယ်တော့မှ သေမှာ မဟုတ်ဘူး။
Previous post ခရီးသွားအများ ပြည်သူများခင်ဗျား… မန္တလေး သို့ အချိန်လင့် ညဉ့်နက်ပိုင်းမှ ရောက်လျှင်
Next post မနက်ဖြန် ဗစ်တိုးရီးယားအမှုရုံးချိန်း မှာ ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင် ရဲ့ ခင်ပွန်း ရဲအရာရှိ ကို စစ်မည်